XOG:- Madaxweyne Xasan Sheekh oo saxiixay wareegto ku saabsan arrinta maamulka Hiiraan iyo Sh/dhexe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Madaxweyne Xasan Sheekh oo saxiixay wareegto ku saabsan arrinta maamulka Hiiraan iyo Sh/dhexe
Ilo lagu kalsoonaan karo oo aynu ka heleyno xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh uu saxiixay wareegto caasimadda cusub ee maamulka gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe loogu magacaabay magaalada Jowhar.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale wareegto uu hore usoo saaray ugu magacaabay in magaalada Buulo-burte ay noqoto caasimadda maamulka labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe, balse arrintaan ayaa noqonaysa mid uu madaxweynaha wax ka badalay.
Go’aanka madaxweyne Xasan Sheekh ayaa kusoo beegmaysa xilli ergada ka qeyb-galeysa shirka Jowhar ay maanta u codeeyeen in caasimadda maamulka Hiiraan iyo Sh/dhexe ay noqoto magaalada Jowhar, taasoo u muuqata qorshe markii hore la isla ogaa.
Dhinaca kale, dhawaan waxay warbaahinta Bulshoweyn idiin soo bandhigtay xog ku saabsan in madaxweyne Xasan Sheekh uu gebi ahaan badalay qorshihiisa hore ee ku aadanaa maamulka gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa haatan u muuqda mid ku hungoobay in madaxweynaha maamulka gobolka Hiiraan iyo Sh/dhexe uu noqdo shaqsi kasoo jeeda beesha Abgaal, taas oo keentay isbedelka ah in caasimadda loo soo wareejiyo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe. HALKAAN KA AQRISO WARBIXINTII HORE